Baby Magic Hair & Body Wash (Soft Cotton Blooms) 488ml - Sky Blue | Buy online | SHOP.COM.MM
Baby Magic Hair & Body Wash (Soft Cotton Blooms) 488ml - Sky Blue
အနံ့လေးသင်းတော့ အိမ်ကမီးမီးလေးအကြိုက်။ ရေချိုးမယ်ဆိုရင် အရင်ကမရဘူး အတင်းငြင်းတာ။ ခုတော့လည်း ရေချိုးမယ်ဆိုရင် သူမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ဇိမ်ခံပြီးတောင် မျက်လုံးလေးမှေးနေသေး။ Read more Hide
သားငယ်လေးက ၁ နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ် အနံ့ပြင်းတာတွေသုံးပေးမိရင်ငိုလို့ဒါလေးသုံးကြည့်တာ မငိုဘူး ကလေးတွေအကြိုက်နူးနူးညံ့ညံ့လေးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် Read more Hide
Our baby magic hair and body wash isagentle, tear-free wash withasweet lily and jasmine scent that will leave your baby feeling fresh and smelling clean. This product can be used safely during five years from manufacturing date.
Specifications of Hair & Body Wash (Soft Cotton Blooms) 488ml - Sky Blue